Banaanbaxyo Waaweyn oo Looga soo Horjeedo Donald Trump oo ka Socda Dalka Maraykanka (VIDEO) - Hablaha Media Network
Banaanbaxyo Waaweyn oo Looga soo Horjeedo Donald Trump oo ka Socda Dalka Maraykanka (VIDEO)
HMN:- Waxaa Dalka Maraykanka ka bilaawday bannaanbaxyo ka dhan ah guusha uu Donald Trump ka gaaray jegada madaxtinimada ee dalka Mareykanka, banaanbaxyadani ayaa ka soconaya qaar ka mid ah magaalooyinka ugu waawayn ee dalkaasi Maraykanka.
Banaanbaxyadan oo ay hogaaminayan dhalinyaro arday u badan, ayaa gelinkii dambe ee shalay ka bilowday magaalooyinka New York, Washington, Boston, Chicago, Berkeley, Pittsburgh, Portland, Austin iyo Nashville.
Bannaanbaxayaasha, ayaa waxay ka careysan yihiin hadaladii uu Donald Trump jeediyay intii uu ololaha ugu jiray Xafiiska Aqalka Cad ee dalak Mareykanka.
to in weeraro afka ah uu ku qaaday qaar ka mid ah bulshada kala duwan ee dalkaasi ku nool oo ay Soomaalida kamid yihiin.
Kumanaan qof oo wata boorar ay ku qoran yihiin hal kudhigyo ka dhan ah Donald Trump, ayaa waxay dhooban yihiin afaafka hore hoyga uu ka degan yahay Magaalada New York ee dalka Maraykanka.
Bannaanbaxayaasha ayaa sidoo kale ku qaylinaya ereyo ay ka mid yihiin “Donald Trump maaha Madaxweynaheyga, maaha in dadku cabsi ku noollaadan iyo jooji naceybka.” iyo halkudhegyo kuwaasi lamid ah.
Trump ayaa intii uu waday ololihiisii wuxuu fagaare-yaal badani ka sheegay inuu xadidi doono Muslimiinta imaaneysa dalka Mareykanka, isla-markaana uu joojinayo qulqulka muhaajiriinta, iyadoona la xusuusto in weeraro afka ah uu ku qaaday qaar ka mid ah bulshada kala duwan ee dalkaasi ku nool oo ay Soomaalida kamid yihiin.